Ọkammụta Pita Ejiọfọ Anabata Ada Igbo Zuruoke – Fides Media
Ọkammụta Pita Ejiọfọ Anabata Ada Igbo Zuruoke
…Katọọ ejighi Asụsụ na Omenaala Igbo kpọrọ ihe n’etiti ọtụtụ ndị Igbo
Ọde Akụkọ Precious Ihunanya Ukeje
Ọkammụta Pita Ejiọfọ, onye bubu onye isi Mahadum Nnamdị Azikiwe dị na Awka, Steeti Anambra, nọrọ n’ụbọchị Nkwọ, 13 Jenuwari nke afọ 2021, nabata n’ụlọ ya, Nwaada Chinecherem Efobi, onye tuuru ugo dịka Ezenwaanyi nke aha otutu ya bụ Ada Igbo Zuruoke.
Agụpụtara aha Nwada Efobi na-abalị asaa n’ime ọnwa a dịka onye nwetere mmeri na asọmpi emere n’etiti ụmụ agbọghọ ndị enyere nnwale dị icheiche n’ihe gbasara omume, mmuta, igosipụta nkà onwe, ọdịnaala nakwa omenaala Igbo n’Ụlọ Oriri Lively Hills (Lively Hills Hotel) dị na obodo Ọkịja na Steeti Anambra.
N’oge ọ na ekwu okwu, Ọkammụta Ejiọfọ, onye nọkwa dịka Onyeisi Otu Sụwakwa Igbo, kọwara ọtụtụ mbọ nke ya na ndị otu ya na-agba iji hụ na akwadoro asụsụ Igbo ka ọghara ịnwụ nwụnyụọ anya. Ọ gara n’ihu too Nwaada Efobi n’ihi nkwụdosi ike nakwa obiisike o nwere iji soro sọọ mpi nke Ada Igbo Zuruoke, nke o jiri nweta okpu ezenwaanyị nakwa ihe ndị ọzọ nke o ritere.
Ọ katọrọ ọtụtụ ndị Igbo nọ na-ebe dị icheiche ndị ọ kọwara dịka ndị na-ejighi asụsụ na omenaala Igbo kpọrọ ihe, wee gosikwa obi mwute n’ebe ndị nne na nna, gomenti na ogogo dị icheiche, ndị ụko chukwu, ndi mmụta nakwazi ndị ozo bụ ndị o kwuru, na ha adịghị eme dịka atụrụ anya na-aka ha, ịkuziri ụmụaka na ndị n’etolite etolite Igbo, nakwa ịkwalite nkuzi nke asụsụ Igbo.
Ọ kwara arịrị n’ihi enweghi mmasị nke a na-ahụta na ọtụtụ ezinaụlọ ebe ndị nne na nna ji asusu Bekee azụlite ụmụ ha. Ọ kọwara na agbụrụ ndị ọzọ dị na Naijiria dịka Awụsa nakwazi Yoruba adịghị eji asụsụ ha egwu egwu. Ọkammuta Ejiọfọ gara n’ihu kwuo na ọ bụụrụ ya ihe nwute nke ukwu mgbe ọ gara nlete na mba Jerusalem. Ọ kọwara na ọhụghị ebe eji asụsụ Igbo dee maka njem ndị jegoro Jerusalem, n’agbanyeghi na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ dị n’ebe ahụ. O degakwara onye Gọvanọ na-achi Steeti Anambra oge ahụ bụ Peter Obi akwụkwọ nke mechara mee ka ya bụ ihe nwee isi.
Onye a bubu Onyeisi Mahadum Nnamdi Azikiwe kwukwara na otu nke ọ nọ n’isi ya gbara mbọ ihụ na a na-akụzi asụsụ Igbo dịka ihe ọmụmụ gburugburu (general studies) n’ụlọ akwụkwọ niile dị na Steeti Anambra, ma kpokuo ndị ụkọchukwu ka ha jisie ike kwado asusu Igbo site na ido Mass na ikwu okwuchukwu na asụsụ Igbo.
Na ntinye okwu ya, Onyeisi ụlọ ọrụ Fides Media bụ ngalaba mgbasa ozi nke ụka Katọlik nke Dayọsis Awka, Ụkọchukwu Martin Aňụsi, onye soro Nwaada Efobi ga nje m a, kwuru na Ọkammụta Ejiọfọ agabigala ọtụtụ ihe na ịgba mbo ya ihụ na-Asụsụ Igbo ga-adịgide. Ọ gara n’ihu gba Ọkammụta Ejiọfọ ume, ma kwuokwa na ihe emume nke Ada Igbo Zuruoke nakwaazi ndị ọzọ yiri ya, na-egosiputa na mbọ ya abụghị nke kụrụ afọ na-ala.
Ọ gara n’ihu kwuo na udị ọnọdụ Ada Igbo Zuruoke dị nma iji gbado ụkwụ mee ka omenaala na asụsụ Igbo bụrụ nke imirikiti mmadụ ga enwe mmasị ịmụta, ebe ụmụ okoro na agbọghọ ndi mara nma, nwekwaa uche na akọ, nwere ike ịsụ Igbo nke ọma.
N’okwu ya, Nwaada Efobi onye kwuru n’ọbụ ya mbụ isoro na ihe emume dị otu a, kọwara na ọbụghịrị ya nje m dị mfe, mana o tinyere obi nakwa ike ya niile nke mere na ọ tuuru dịka onye nke mbụ na ihe emume ahụ.
O kwukwara na ya amaghị na ọ ga adabara ya ituru ugo dịka onye nke mbụ, ma bụkwara onye a ga ekpunye okpu nmeri dịka ezenwaanyị, mana ọtụrụ ya n’anya dịka ya bụ ihe emume siri jee, we kpọkuo ndị Igbo ka ha gbaa mbọ hụ na asụsụ na omenaala Igbo bụ nke echekwawara ọfụma ma kwalite kwa n’ụzọ kwesiri ekwesi.
Otu onye so ndị dujere Ezenwanyị a na nke Ọkammụta Ejiọfọ bụ Nwaada Chidịmma Ezeneche bụ onye hiwere ihe emume ebe Nwaada Efobi tuuru ugo ahụ, kwuru na ọ bụ oge e nwere mgbachi ụzọ nihi ọrịa coronavirus ka ọ nọrọ chepụta ihe emume a, ma kọwa na ihe kpaliri nke a bụ nchọpụta ya na ọtụtụ ndị Igbo, ọkachasị ndị ntolobịa, amaghị ka e si asụ asụsụ ha. Ọ gara n’ihu iji ihe nzirita ozi nke WhatsApp juọ ndị mmadụ ụfọdụ ajụjụ na asụsụ Igbo nke ọtụtụ n’ime ha enweghi ike ịzata.
Ọ sịkwara na ọ gbara mbọ ịhụ na enweghi aka azụ e tinyere n’ịhọpụta onye nwere mmeri na emume ahụ. Ha nile nwetara ntuzi aka kwesiri ha, ebe mkpọpụta ndị ọka ikpe gosipụtara ihe ndi bịara ya bụ ihe emume bu n’obi.
Ndị ozo ndị soro jee na nke Ọkammụta Ejiọfọ gụnyere Ụkọchukwu Obinna Dike, onye na esote Ụkọchukwu Anusi na Fides Media, Precious Ukeje, onye nta akụkọ. Mazị Arinze Agbanụsị, onye nkuzi (associate professor) na Mahadum Nnamdị Azikiwe, nakwazi nwunye Ọkammụta Ejiọfọ nabatara ha nke ọma.